Kutsvaka sei Nyora Tsamba mupepeti kusimbisa mumugwagwa uye migwagwa matambudziko kuona mvura kutema achiwanzoitika mumwaka wemvura? Pano tiri ane Tsamba mupepeti nezvemvura kutema matambudziko munguva monsoon mwaka mumaguta Metro akafanana Delhi.
15 Mbudzi 2017
chidzidzo- Ichisimbisa pamusoro mvura kutema matambudziko Delhi munguva monsoon mwaka
Kuburikidza yako inokosha pepanhau Ndinoda kuzochera pfungwa hanya zviremera kurutivi dambudziko remvura kutema muna Delhi panguva dzose monsoon mwaka.
Yakanga zvishoma Zvinoshamisa kuona mativi migwagwa yakawanda uye migwagwa vari Delhi kuitwa waterlogged chete pashure maawa mashomanana inoratidza mvura mazuva mashoma apfuura. Izvi zvinoratidza chikuru dambudziko pamwe abudise maitiro muguta. Delhi anowana mvura seizvi chete mavhiki mashoma pagore panguva dzose mwedzi. Asi kunyange ipapo guta vasingagoni kurarama nazvo. Zvinhu zvakanga kunyanya zvakaipa mumigwagwa pazasi vamwe flyovers. Vatyairi vakawanda vaifanira kusiya motokari dzavo pashure pokunge nezano mumadziva emvura. Waterlogging zvinoreva saturation ivhu nemvura. Kana Migwagwa zvitsva zviri kuvakwa, kunyanya pasi-nhema dzoga, zvakakosha kuti munhu akakodzera abudise gadziriro iri kuiswa panzvimbo kuitira kuti mvura iri kukurumidza vakapedzwa kana mvura. Sezvo ari munhu guru India, zviri incongruous kuona nemafashamo migwagwa pashure nezvitsinga mvura.
Gore negore madzvotsvotsvo kuti zvimwe zvikamu guta kutambudzika kubva waterlogging. The vasanaiwa nemvura kwezvivako, kana iripo zvachose, haisi rakakwana pave abudise mvura kuitira kuti migwagwa pasi-nhema munharaunda kuti kufashamirwa. Roads vari makavhara zvichitungamirira kuwandisa kwemotokari mumigwagwa, netsoka kuti afambe nomumvura kuburikidza nemafashamo mumigwagwa uye kunyanya mumaguta murombo, vanogara muzvitangwena kana squatters vane dzimba dzavo kazhinji damage mvura, izvo zvinogona kutora mazuva akawanda kuti taramuka. Asi waterlogging zvinoitika pose pose, kana vapfumi kana varombo nharaunda. Mushumo ekunze pepanhau kwegore rimwe nerimwe nezvengozi musi chaiwo kana mvura vanotarisirwa kutanga uye kana monsoon akauyisa mamwe zvichidzika mvura pane mumakore asati pasinei kuti zviremera hanya vakatadza mafambisirwo ezvinhu.
VERENGA DZIMWEWO: 6 Tips Of Kuwana rondedzero Writers
Our MCD ane pfuma zvakakwana kutarisira zvinhu, asi marara kukodzera nokurasa pedyo kuruzhinji uye kukundikana MCD mumwe mukuru zvikonzero sewers muchizadzwa ndokuvhungwa marara iyo exacerbates mvura kutema. Pamusana waterlogging vanhu anofanira kutarisana mijenya matambudziko akafanana yetsaona kunyange kunokonzera rufu dzimwe nguva, Kuwandisa kwemotokari mumigwagwa, kuwedzera Umhutu zvichingodaro. Tinovimba kuti Public Works Authority achatora dambudziko mvura kutema zvakakomba uye tsika itsva uye matanho kudzivirira matambudziko kwakadaro ramangwana toredzera.
« pamusoro 8 Career Options vane mari mari mu India
World AIDS Day – Zvita 1, 2017 : rondedzero, dingindira, masirogani, Quotes, Messages, Sei Kupemberera, nhaurwa »